Nweta ihe omuma: Nzube nke ndi ahia na njide | Martech Zone
Nlele weputara oge opupu ihe ubi nke usoro ihe omuma nke ndi ahia ya, nke mere ka odi nfe karia ndi ahia ka ha nweta ihe nlere anya nke ndi mmadu 360 ma soro ndi ozo ndi ozo nwere ihe ịga nke oma na ndi mmadu n’enye ha ikike.
Na ụlọ ọrụ buru ibu ebe ọtụtụ ngalaba dị iche iche - site na ire ahịa na mmepe ngwaahịa na azụmaahịa - ndị ahịa na-agbagha site na isi ihe data dị iche iche gbasara ọrụ ndị ahịa, mana ha ga-agba mbọ ime ka ndị ahịa nwee obi ụtọ na itinye aka. Nke a bụ otu esi enweta ihe:
Nkuzi Nkuzi modul na-eme ka azụmaahịa ndị na-enweta ugboro ugboro tụọ ojiji maka ngwaahịa, nnabata na usoro ihe ịga nke ọma ma jiri ndị a mee ka njigide ndị na-ejide njide ndị ahịa gafee ọrụ ahụ.
Nzaghachi njikwa nzaghachi na-eme ka azụmahịa azụmaahịa na-abịaghachi na-atụle ahụike ndị ahịa site na nyocha ma na-eme ihe dabere na nzaghachi nyocha - site n'ime Salesforce.com.
Ndụ Nchịkwa Ego Ndụ na-eme ka azụmaahịa ndị na-erigharị ego na-agụta ma na-enyocha ọfụma ma chọpụta mmetụta ya na mmụba ego na-enweta na uru ndị ahịa na-aba.
Usoro njikwa njigide na-eme ka azụmaahịa na-enweta ego na-emezigharị iji kwado ma na-arụ ọrụ arụmọrụ maka njigide ndị ahịa - ozugbo site na Salesforce.com.
Gainsight na-enye ndị nwere ihe ịga nke ọma na ndị ahịa ka ha nwee echiche zuru oke banyere ndụ ndị ahịa, na-ebute ngalaba silos, nkwukọrịta okwu abụọ na mkparịta ụka zuru oke. Ike ọrụ ọhụụ ọhụrụ nke Gainsight na-enyere ụlọ ọrụ aka ịnye ndị ahịa ha kachasị ahịa, ọtụtụ ahịa uru. Ndị ụlọ ọrụ na-ejigide njigide na mmụba uto na data kachasị dị ugbu a gbasara ndị ahịa ha na mkpịsị aka ha na site n'ihu ndị na-akwado ha.
Tags: Nkuchi ndi nkuchichurnnjigide ndị ahịaahịa ihe ịga nke ọmaihe ịga nke ọma nke ndị ahịanjikwa nzaghachinghọtaNjikwa UtoNdụ Ego NwetaNjikwa njigidendị ahịa
Ndụmọdụ ahịa dị ukwuu! Daalụ nke ukwuu maka ozi .. N'ezie ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị. Daalụ maka ịkekọrịta anyị.